LEGO Art 31203 World Map သည်တရားဝင်အစားထိုး mosaics နှစ်ခုရရှိသည်
LEGO Art ၃၁၂၀၃ ကမ္ဘာ့မြေပုံသည်တရားဝင်အစားထိုးတည်ဆောက်မှုနှစ်ခုရရှိသည်
10 / 09 / 2021 10 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 292 Views စာ0မှတ်ချက် 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ, art, ဘီလ်ဒန်, ဒိန္းမတ္, ဥရောပ, Lego, LEGO art, LEGO.com, အဆိုပါ LEGO Group, တိုက်တန်းနစ်
အဆိုပါ Lego Group သည်အစားထိုးတည်ဆောက်မှုအသစ်နှစ်ခုအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ၊ လက်ရှိအကြီးဆုံး Lego အားလုံးအချိန်အစုံ။
ဒါဟာလာမယ့်နှစ်လအတွင်းမှာစံချိန်တင်ကျော်လွန်သွားမယ့်စံချိန်တစ်ခုပါ Titanic ၏ကြီးမားသောပုံစံသို့သော်ယခုအချိန်တွင် mosaic ၁၁,၆၉၅ ချပ်သည်တစ်ခုတည်းသောအစိတ်အပိုင်းအများစုအတွက်သရဖူကိုယူသည်။ ထိုစဉ်မှာပင် 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ standard အနေနှင့်ထိုပန်းကန်များနှင့်ကြွေပြားများအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းများစွာပါ ၀ င်သည်artသူ့ရဲ့သမုဒ္ဒရာပတ်လည်မှာ Lego ယခုအခါ Group သည်အရောင်အသွေးစုံရန် alt တည်ဆောက်မှုနှစ်ခုကိုထပ်မံဖြန့်ချိလိုက်သည် Lego Art မော်ဒယ်။
ပထမသည်ကုမ္ပဏီ၏မွေးရပ်မြေကိုခေါင်းညိမ့်သည်၊ ဒိန်းမတ်၏မြေပုံတစ်ခုပါ ၀ င်သောပစ်မှတ်ကဲ့သို့စက်ဝိုင်းပုံနောက်ခံနှင့်ဒုတိယသည်ဥရောပကိုအကွက်ဆင်သည်။ သူတို့ကို set ပေါ်မှာတွေ့လိမ့်မယ် ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ at LEGO.com၎င်းတို့ကို 'လှုံ့ဆော်မှုပြခန်း' အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေရာတွင် (PDF ညွှန်ကြားချက်များသို့တိုက်ရိုက်လင့်များအတွက် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဒိန်းမတ်နှင့် ဒီမှာ ဥရောပအတွက်။ )
“ ကျွန်ုပ်တို့၏ထက်မြက်သောဒီဇိုင်နာများသည်သူတို့၏ကမ္ဘာ့မြေပုံများကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သောအထင်ကြီးလောက်စရာနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပါ” ဟုစာမျက်နှာကအကြံပြုသည် Lego ဒီဇိုင်နာများသည်ဘတ်စ်ကားသမား၏အားလပ်ရက်နှင့်မစိမ်းပေ။ (သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်ဤအလုပ်အတွက်သင်ဖြစ်ခဲ့လျှင်သင်ဖြစ်လိမ့်မည် Lego အဖွဲ့လား?)
ဒီ mosaics တစ်ခုခုကမင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်ထက်မင်းအတွက်ပိုအကျိုးရှိစေသလား၊ ဒါမှမဟုတ်အဖြူ၊ အပြာ၊ အစိမ်း၊ လိမ္မော်ရောင်နဲ့အဝါရောင်အပိုင်းအစတွေကိုသုံးပြီးမင်းနိုင်ငံရဲ့မြေပုံတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့မင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။ 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ ယခုမှာ ၀ ယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ LEGO.comမရ။ မင်းငါတို့ရဲ့ review ကိုဖတ်နိုင်ပါတယ် ဒီမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏တသမတ်တည်းနေရာတစ်ခုနှင့်လည်းထိုက်တန်သည့်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေရန် ထိပ်ဆုံး LEGO သတ်မှတ်ချက် 20 စာရင်း.
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ - နွေ ဦး တံတား
LEGO ပိုများသည် Monkie Kid ၂၀၂၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ပြီလား။ →